Hapana bhatiri ine iOS 11? Matipi ekuvandudza kuzvitonga | IPhone nhau
iOS 11 yasvika, nezvose zvakanaka muchimiro chemashandiro matsva, uye zvese zvakaipa zvekuzvitonga izvo vezvenhau vane hunyanzvi vari kuratidza. MuActualidad iPhone isu tanga tichikuudza iwe neBetas, zvisinei, zvinoita sekunge Apple haina kuwana nguva yekuivandudza. Zvichiri uye zvakadaro Tinogona kuisa dzimwe nzira nechinangwa chekuwedzera kuzvitonga kwe iPhone yedu neIOS 11 zvakanyanya sezvinobvira.
Saka isu tichaenda kukupa iwe akakosha matipi ayo iwe aunogona kuwedzera iyo bhatiri mashandiro e iPhone yako neIOS 11. Zvekare zvakare tadzoka nemazano akanakisa eiyo iPhone yako uye yako iPad.
Tichaenda nezvikamu, nekuti iwe uchazoziva zhinji dzeiyi matanho ekuponesa. Nekudaro, ichokwadi kuti kuderera kwekuzvitonga hakuna kunyatso kucherechedzwa mumidziyo yakadai seyeKuwedzera huwandu hweiyo iPhone, uye zvimwe zvishoma muchiitiko cheiyo iPhone 7. Zvisinei, zvishandiso zvakakanganiswa zvakanyanya nekudonha uku pamashandisirwo ebhatiri ndiwo ma iPhone 6s uye iPhone 6, uyezve sezviri pachena hama dzayo diki, iyo iPhone SE uye iyo iPhone 5s. Ichokwadi ndechekuti kuita kwese kwechigadzirwa hazvireve kudonha, asi izvo zvebhatiri ndizvo zvinoita. Saka, ngatiendei ikoko nemazano ekuvandudza mashandisiro ebhatiri atinayo kwauri.
1 Manage Nzvimbo
2 Kugadziridza kumashure, nzira yekutiza
3 Chengetedza kupenya kwechiso
4 Gadzira Notices
Iyo nzvimbo ndeimwe yeanonyanya kuona mapoinzi, vashandisi vazhinji havapedze kumisikidza inoenderana neiyo iPhone, uye chokwadi ndechekuti ine bhatiri rakakosha remabasa ayo vazhinji vedu vanhu vasingashandise zvachose asi izvo chaizvo zvine kuda bhatiri risingaguti. Ndosaka zvakakosha kuti iwe uende kuZvirongwa> Zvekuvanzika> Nzvimbo uye wotanga kuzvitarisa. Izvo zvakakosha kuti iwe uongorore mafomu api aunoshandisa nguva dzose, uye kunyanya kana kushandiswa kwe "Nguva Dzose" nzvimbo kusingaitiswe mune chero application, nekuti izvi zvinoreva kuti kunyorera kunogara kuchitsvaga kwatiri, kunyangwe tichivhura kana kwete.
Imwe pfungwa yekutora nzira kuenda ku "System Services" uye nekumisa zvingangoita zvese zvaungasarudza, uine kukoshesa kwakanyanya kunzvimbo dzinowanzoitika. Nenzira iyi, foni inomira ichigara ichitiisa isu nechinangwa chekuziva patiri uye pasina chaunoda, ndiyo imwe yesarudzo inoshandisa bhatiri rakanyanya.
Kugadziridza kumashure, nzira yekutiza
Iyo yekumashure yekuvandudza yakanaka kune maficha akadai seTeregiramu kana Spark, nekuti patinopinda application tinenge tiine izvo zvirimo zvakatakurwa zvakatwasuka, tisingamiriri kuti iko application kurodha zvirimo. Asi izvi zvine dambudziko, kune maficha akaita seWhatsApp, Facebook uye Instagram ayo anoshandisa chinhu ichi pasina tsitsi kana bhatiri redu, kana zvekare zvekushandisa kwedu nharembozha. Sezvazvinoitika kuti iwe une akati wandei asingazungunuke WhatsApp mapoka kana uine akawanda mazaziso pa Instagram, bhatiri rako rinogona kunge richidonhedza nenzira inokatyamadza. Kugadzirisa chinhu ichi isu tichaenda Zvirongwa> Zvakajairika> Kumashure kugadzirisa, uye tichava nekushanduka kuri nyore kusarudza.
Chengetedza kupenya kwechiso
Vazhinji vashandisi veIOS 11 vaona kuti kupenya kunokwira zvakanyanya mumamiriro ezvinhu asingadiwe. Nhanho yekutanga ichave yekuenzanisa iyo otomatiki kupenya muIOS 11, yeizvi tichaenda kuZvirongwa> Kuwanika> Ratidza marongero uye mukati medu tichava nekupenya otomatiki. Ipapo isu tichaenda kuisimudza kusvika pakukwirisa tisati taimisa, ipapo tichaenda kune chikamu chakasviba chatinacho mukati medu uye tobva taenderera nekumhanyisa kupenya kwe otomatiki. Kana iwe ukaona kuti haisiriyo mhinduro, iwe unenge usina imwe sarudzo kunze kwekugadzirisa kupenya pamurume kusvika iko kunotevera kunatsurudzwa.
Zvinodikanwa zvakadii kuti zvimwe zvikumbiro zviri kukutumira iwe zviziviso kana kuti zvinogara zvichibatana nemaPush server Zvakanaka, chokwadi chiripo ndechekuti vangangoita vazhinji vashandisi vane notices dzisiri madikanwa dzakaitwa, saka tinokurudzira kuti uende kuNotification Center uye unogadziridza izvo zvikumbiro zvaunoda kukuzivisa pane iyo skrini yekukiya, iyo iwe yaunopa kune vamwe chete iyo nhamba muiyo icon, kana kunyange kukutadzisa iwe kubva kuziviswa kunze kweapp. Zvinotaridza kunge hazvishande, asi chokwadi ndechekuti kudzikisa kuwanda kwekuti runhare rwunobatana nemaseva kunochengetedza hupenyu hwakawanda hwebhatiri, kunyanya kana uchiwanzofamba nezvifambiso zveveruzhinji zvakaita seMetro uko kufukidza kunowanzo shomeka.
Pasina imwezve ado, aya ndiwo mazano edu makuru kuti iwe ugone kuwana zvakawanda kubva bhatiri rako neIOS 11, zvakadaro, isu tine zvishoma zvekumirira iOS 11.0.1.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Hapana bhatiri ine iOS 11? Matipi ekuvandudza kuzvitonga
zita rangu akadaro
Asi hei, chii mania ... Mira zvishoma usati wataura kuti ios11 inoshandisa yakawanda bhatiri mune mamwe ma terminals. Yangu iPhone 6s haina kukosha kana haina mutorwa bhatiri kana chero chinhu chinoshamisa. Uye bhatiri iri padanho rakaenzana neIOS10 ... asi chokwadika ... sezvo iwe ukaisa ios11 kusvikira yagadzikana, maawa mazhinji anopfuura (kunyangwe maviri kana matatu mazuva). Nekuti yakangoiswa, inoita zvinhu chiuru kumashure iyo inodurura bhatiri uye kupisa iyo terminal, ehe, ichokwadi ... asi ndeyechinguvana. Haisi iyo yebhatiri kuita iyo iwe yauchazogara unayo. Ingova nemoyo murefu uye rega ndiongorore raibhurari yese, reindex rese data, gadzirisa zvivakwa, nezvimwe. etc. etc.
Uye rega kutaura zvakanyanyisa izvo zvinhu zvisinganzwisisike zve "bhatiri rakanyanya kushata mu ios 11 mune ino kana iyo terminal" kuva yekukurumidza mhedziso (uye manyepo).
Pindura kuzita rangu
Ndanga ndichiyedza iOS 11 kubvira yayo beta, pane zviuru zvetambo paReddit uye maforamu akasarudzika. Hakusi chete kuti iOS 11 inodya bhatiri rako chairo, asi kuda kwako kuti inoshandisa zvakafanana neIOS 10 kunyepa zvachose, kupfuura kusimbiswa.
Antonio Jesu Sanchez Guzman akadaro
Ndine iphone 6S uye ndakwidziridza kune ios 11 kwevhiki rapfuura. Ini ndinogona kukuvimbisa iwe kuti inoshandisa zvakapetwa kaviri bhatiri kupfuura neIOS10
Pindura kuna Antonio Jesus Sanchez Guzman
Bhatiri rangu raive rakakwana kudzamara ndaisa ese gumi nerimwe uye ini ndoda kudzikisa